Mia Domo / मेरो घर – Dialogoj | OpenTran
Mia Domo / मेरो घर – Dialogoj
Tradukisto & vortaro online Esperanto - Norvega Tradukisto Mia Domo / मेरो घर – Dialogoj
जुलिया: नमस्ते, Zhanna। तपाईंलाई उमेरका लागि देखेको छैन! तिमीलाई कस्तो छ?
अन्ना: हाई, भलेरिया। म आराम छु धन्यवाद। हामी भर्खर नयाँ ठाउँमा सरेका छौं, त्यसैले म प्राय: यस क्षेत्रमा देख्दिन।
जुलिया: तिमी अहिले कहाँ बस्छौ?
अन्ना: हामी शहरबाहिर दुई तलामा छुट्टिएको घरमा बस्छौं।
जुलिया: ओह, राम्रो सुनिन्छ! मलाई लाग्छ पृथक घर फ्लैट भन्दा धेरै राम्रो छ।
अन्ना: यो छ। हामीसँग अब विभिन्न गतिविधिहरूको लागि थप ठाउँ छ। उदाहरण को लागी, हामी पिंग पंग वा पछाडिको मैदानमा बास्केटबल खेल्न सक्छौं।
जुलिया: त्यो ठूलो छ! र, त्यहाँ कति कोठा छन्?
अन्ना: माथिल्लो तलामा तीन बेडरूम र एक बैठक कोठा तल छ। भान्छा पनि तल माथी छ।
जुलिया: बाथरूमलाई कस्तो छ?
अन्ना: हामीसँग दुईजना छन्: एउटा - माथिल्लो र अर्को - तल।
जुलिया: त्यसोभए, तपाईसँग अब आफ्नै कोठा छ, यो सहि छ?
अन्ना: हो, यो सहि छ। हामी बसाइँ सर्नु अघि मैले मेरो सानो भाइसँग एउटा कोठा बाँड्न थालें किनभने हाम्रो फ्ल्याटमा केवल दुई बेडरूम थिए।
जुलिया: मलाई याद छ। तपाईंले मलाई दुई वा बढि आमन्त्रित गर्नुभयो।
अन्ना: तपाईलाई मेरो नयाँ घरमा पनि स्वागत छ। म तपाइँलाई वरपर देखाउँछु र हामी बिभिन्न खेलहरू खेल्न सक्छौं।
जुलिया: धन्यवाद। म त्यो गर्छु। हुनसक्छ, अर्को साताको अन्त्यमा मेरा आमाबुवाहरूले मलाई तपाईंकहाँ आउन दिनेछन्। मलाईँ थाहा छ तपाईको नयाँ ठाउँमा कसरी पुग्ने।
अन्ना: सामान्यतया, म बस लिन्छु, जुन केन्द्रीय बजारबाट छुट्छ। त्यहाँ पुग्न आधा घण्टा लाग्छ। म कहिले तपाईंलाई बाहिर जान कहिले बताउँछु।
जुलिया: हुन्छ भने। तपाईंको नयाँ घरको बारेमा मलाई केहि बढि भन्नुहोस्।
अन्ना: ठीक छ, मेरो घर मा मेरो मनपर्ने स्थान बैठक कोठा हो। यो हाम्रो लागि एक बहुआयामी कोठा हो। हामी टिभी हेर्छौं, कम्प्युटर गेमहरू खेल्छौं, सोफामा आराम गर्छौं, पुस्तकहरू पढ्छौं, पारिवारिक भोजहरू र दैनिक भोजमा। हाम्रो बिरालाको बच्चाहरूलाई बस्ने कोठा पनि मनपर्दछ।
जुलिया: तपाईंको ओछ्यान कोठाको बारेमा के छ? के यो विशाल छ?
अन्ना: यो कोठाभन्दा सानो छ, तर अझै म साथीहरू लिन सक्दछु। त्यहाँ ओछ्यान, वार्डरोब, कुर्सीसहितको डेस्क, टिभी र बुकशेल्फ छ। भुइँमा एक बाक्लो कार्पेट छ, त्यसैले हामी यसमा बस्न सक्दछौं र विभिन्न बोर्ड खेलहरू खेल्न सक्दछौं, जस्तै चेस, चेकर्स, बिंगो, डोमिनोज, आदि।
जुलिया: ओह, यो महान छ! हामी चाहन्छौं कि हामी पनि छुट्ट्याइएको घरमा जान सक्छौं।
अन्ना: तपाईको फ्ल्याट पनि बरु विशाल छ।
जुलिया: हो, यसमा चार बेडरूम छन्, तर हामीसँग खेलको लागि विशेष खेल मैदान छैन।
अन्ना: म देख्छु। यो प्ले गर्न वास्तवमा राम्रो छ जहाँ तपाइँ खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक, हामीसँग अहिले ठूलो बगैचा छ। मलाई यसको दृश्य मनपर्दछ।
जुलिया: त्यहाँ कुन बोट छन्?
अन्ना: मेरी आमाले विभिन्न तरकारी उब्जाउनुहुन्छ। त्यहाँ धेरै फल रूखहरू पनि छन्। म आशा गर्दछु कि अर्को गर्मीमा हामीहरुसंग आफ्नै फसल छ।
जुलिया: घरमा बस्ने धेरै नै सुविधाहरू छन्।
Kio Vi Estos? तपाईं के हुन जाँदै हुनुहुन्छ?
Ĉe la Vojaĝagentejo ट्राभल एजेन्सीमा
Unua rendevuo पहिलो मिति
Plendante Ĉe La Butiko स्टोरमा गुनासो गर्दै